KISMAAYO, Soomaaliya - Dagaal xooggan oo ka dhashay khasaaro lixaad leh ayaa waxa uu ka dhacay maanta duleedka magaalada Kismaayo, ee xarunta gobolkla Jubbada hoose.
Dagaalkan oo u dhaxeeyay Al Shabaab iyo ciidamada maamulka Jubbaland ayaa ka qarxay shalay gelinkii dambe deegaanka Baar-Sanguuni, oo qiyaastii 50KM dhanka waqooyi uga beegan magaalada Kismaayo.
Sarkaal katirsan ciidamada Jubbaland, oo la hadlay Warsidaha Garowe Online ayaa xaqiijiyay in Lix Askari looga dilay dagaalka, iyguna ay Al shabaab ka dileen 9 xubnood, oo qaar kamid ah ay Saraakiil ahaayeen.
Dagaalka ayaa yimid markii Ciidamada Jubbaland weerar dhowr jiho ah ku qaadeen Al shabaab-ka ku sugan Baar-Sanguuni, iyagoo taageero ka helayo Militariga Kenya, ee qeybta ka ah Howlgalka AMISOM.
Al Shabaab waxay sheegtay inay iska caabisay duulaanka lagu soo qaadey, islamarkaana ay dishay in ka badan 10 Askari oo katirsanaa maamulka Jubbaland, sida ku xusan war lagu baahiyay warbaahinta ku hadasha Afka Kooxdan.
Dagaalka ayaa kusoo beegmay xilli maalintii shalay uu Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo ay wehliyanayeen Wasiiro iyo Saraakiil ciidan uu booqday Ciidamo loo diyaariyay duulaan ka dhan ah Al shabaab oo ku sugan Buulo-Gaduud, oo 30KM dhanka Waqooyi uga beegan Kismaayo.
Ciidamada Jubbaland iyo kuwa shisheeye ee taageera ayaa in mudo ah kula dagaalamayay Al Shabaab deegaanada ku dhaw Kismaayo, iyagoo ku fashilmay inay Kooxdan ka sifeeyaan guud ahaan gobollada Jubboyinka iyo Gedo.
Labo Muwaadin oo kasoo jeeda dalka Kenya ayaa Duqeyn lagula eegtay Soomaaliya...
Dibadbax ka dhan ah Kenya oo ka socda Beled-Xaawo
Soomaliya 23.12.2017. 12:45
Goobta "lagu hayo" dakhaatiir ay Al-Shabaab qafaalatay oo la shaaciyey
Wararka 07.08.2019. 11:08
Afrika 19.05.2018. 22:05
Soomaaliya: Juxa oo ka warbixiyay Socdaalkiisa Gedo
Soomaliya 02.01.2018. 12:16
Duqeyn cirka ah oo lagu burburiyay Gaari walxaha qarxa saarnaa
Soomaliya 13.04.2018. 18:02